भारतीय कम्युनिस्ट आन्दाेलनकाे नियति र त्यसको शिक्षा - क. शेषमणि आचार्य
आज : २०७६ मंसिर ६ गते शुक्रवार
भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति र त्यसको शिक्षा
क. शेषमणि आचार्य २०७६ असार २५ गते बुधवार
भर्खरैजसो बेलायती लेखक आर्थी ब्राउनको संसारका कम्युनिस्ट पार्टीहरुकोबारे विवेचना गरिएको पुस्तक “The Rise and Falls of Communism” नामक पुस्तकको चर्चा पढेँ । निकै चर्चित यस पुस्तकमा उनले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको उत्थान र पतनबारे एक लेख लेखेका छन्, यस लेखको चर्चा भएको छ ।
यो चर्चा मेरो फेसबुक कक्षमा जानेमाने कम्युनिस्ट नेता कमरेड स्वनाम साथीको सहयोगबाट प्राप्त भएको हो । यसले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, कम्युनिस्ट सरकारको उदय र अस्तबारे संक्षिप्त तर पुग्दो मात्रामा टिप्पणी गरेको छ, जसलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा केही समययता मैले लिएका धारणासँग मेल खाएको अनुभव भयो ।
त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर मैले यहाँ यो छाेटो टिप्पणी तयार गरेँ । यसलाई सबैभन्दा पहिले मेलै कमरेड स्वनामलाई नै भेट गरेँ । उहाँले यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्नुभयो । त्यसरी नै भारतमा “हिन्दुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएसन”का केन्द्रीय संयोजक कामरेड आई.जे. राय र अरु केही वाम कमरेडहरुलाई पनि यसको हिन्दी अनुवाद पठाएको छु । उहाँहरुको भने अहिलेसम्म प्रतिक्रिया पाएको छैन ।
भारतमा भर्खरै आमचुनाव सम्पन्न भएको छ । विश्वमा भारत आधुनिक शक्ति-राष्ट्रको रुपमा उदाउँदै गरेको देश हो, जहाँ ठूलो मजदुर वर्गको अस्तित्व छ । त्यसैगरी अर्को विडम्बना पनि छ, त्यहाँ करोडौँको सङ्ख्यामा गरिबी, भोकमरी, सडकवास भएका गरिब वर्गको अस्तित्व बिझाउने गरी छ । त्यसैगरी अनेक आदिवासी जनता पनि समस्याग्रस्त छन् ।
भारतीय समाजको संरचना हेर्दा त्यहाँको समृद्धि, समानता मार्क्सीय समाजवाद बाहेक अरु विकल्प हुन सक्दैन तर यसपटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफ्नाे विगतको छवीलाई कायम राख्न सकेनन् । लगभग ३४-३५ वर्षसम्मको बङ्गालको कम्युनिस्ट शासन नराम्ररी ढल्यो । यस्तै समस्यालाई मनन गरी याे छोटो अभिलेख तयार पारेको छु र यसले हाम्रो विद्यमान नेपाली समाजलाई पनि केही इशारा गर्न सक्छ ।
निश्चय नै, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको लामो इतिहास हुँदाहुँदै पनि यसको उत्थान हुन नसक्नुमा यसको सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल नहुनु नै मुख्य कारण हो । बृटिश शासनताका भारतीय कम्युनिस्टहरूको भूमिका चित्त बुझ्दो भएन । तर भारतको स्वतन्त्रतापछि सम्पन्न आम चुनावहरुमा उसको उपस्थिति त्यति कमजोर पनि रहेन । तर सोभियत संघ र पूर्वी यूरोपका साम्यवादी शासन नराम्ररी जब ढले तिनका केही कारण र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको पतनका कारणमा सदृश्य हुन आउँछ ।
मुख्यतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको मानसिकता सुरुदेखि नै पराधीनतामा आधारित रह्यो । यसले कहिले दक्षिणपन्थी र कहिले उग्रवामपन्थी गल्ति गरिरह्यो, जुन कुरा पहिलो भारतीय कम्युनिस्ट नेता (?) एम.एन. रायको पालादेखिपछि डाँगे, बिटी रणदिवेदेखि अहिलेसम्म नै रहिरह्यो ।
चीनमा स्टालिनसँग मतभेद भएपछि माओले चिनियाँ क्रान्तिको मौलिकताको विकास गर्नुभयो भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भने कहिले रुसजस्तो, कहिले चीनजस्तो हुँदै गयो । यो भारतमा डाँगेको पालामा सिपिईको माध्यमबाट काँग्रेसको पुच्छर नै बन्यो ।
मार्क्सवादी इतिहासकार एवं उत्कृष्ट विद्वान् श्रीपाद अमृत डाँगे र एम.एन. रायसमेत कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै विचलित र पलायन हुन पुगे । यसरी नै बिटी रणदिवेको पालामा भएको तेलङ्गाना क्रान्ति पनि असफल भयो ।
पछि चारु मजुमदारले नेतृत्व गरेको नक्सलवादी सशस्त्र किसान क्रान्तिदेखि अहिलेसम्मकै भारतीय माओवादीहरुकाे चालु क्रान्ति पनि खालि धर्म निर्वाह जस्तै भएको छ । करिब ३४-३५ वर्ष लगातार शासनमा रहेको पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुराजस्ता राज्यबाट कम्युनिस्ट पार्टीले शर्मनाक हार बेहोर्नुपर्यो ।
वास्तवमा यसको कारण उसभित्र जरो गाडेको नोकरशाहीतन्त्र नै हो । जसको कारणले कार्यकर्ताहरुमा उत्पन्न भ्रष्टाचार र ठालुपनले नै पार्टी पूर्णतया जनताबाट अलग-थलग भयो । एकपटक देखापरेको यस्तो पुच्छरवादी गलत प्रवृत्ति जति सुधार्न खोजेपनि सफल हुन सकेन । यो काम सम्पन्न गर्न न त डाँगे, रणदिवे, ज्योति वसु, नम्बुदिरिपाद, चारु मजुमदारले सके, न ती पछिका वा अहिलेका नेताहरूले सके ।
आचरणमा देखापरेका यस्ता विकृतिले नै भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको यस्तो नियति बनायो ।अबका दिनमा भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन जटिल जीवनमरणको संघर्षबाट गुज्रन बाध्य हुनेछ ।
(लेखक पुराना कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ ।)
पछिल्लाे - कृषिको समाजवादी रुपान्तरण : एक समीक्षा
अघिल्लाे - बागलुङमा स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम: एक विश्लेषण
काठमाडौं, ४ मंसीर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ । उहाँले केही...
रुपन्देही । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामो मिहिनेतपछि नेपालमा आएको...
भाइ प्रकाश दाहाल मभन्दा तीन वर्षपछि २०३८ सालमा जन्मिएको हो । हाम्रो परिवारमा तीन जना दिदीबहिनी...
सन् १९२४ मा लेनिनको मृत्यु पश्चात सोभियत सङ्घमा स्टालिन युग प्रारम्भ भयो र उहाँको अगाडि सबैभन्दा...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद...
राम्रो तयारीले कृषिमा जस्तै सबै क्षेत्रमा समय बचाउँछ । निराशा र जोखिम कम गर्छ । राम्रो...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि ‘जवरजस्ती करणी’को गम्भीर आरोप लगाएको भनिएकी संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीले सभामुख महराले आफूमाथि कुनै...
काठमाडौं, ४ मंसीर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ । उहाँले केही मन्त्रीहरूलाई हटाई सो स्थानमा नयाँ मन्त्रीहरू...
रुपन्देही । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामो मिहिनेतपछि नेपालमा आएको आर्थिक विकासको अवसरलाई कुनै पनि हालतमा...
भाइ प्रकाश दाहाल मभन्दा तीन वर्षपछि २०३८ सालमा जन्मिएको हो । हाम्रो परिवारमा तीन जना दिदीबहिनी र एक जना भाइ थियौं ।...